Abokufika basola umasipala ngokubahlukumeza | News24
Abokufika basola umasipala ngokubahlukumeza
isithombe: lethiwe makhanyaAbantu bokufika abasale dengwane ngemuva kokuthathelwa izimpahla zabo ngoMsombuluko.
ABOKUFIKA kuleli abaziphilisa ngokugunde abantu amakhanda emgwaqeni u-Garfield Street edolobheni laseMgungundlovu basola uMasipala uMsunduzi ngokubahlukumeza ngoba bengabona abakulelizwe.
Lokhu kulandela emva kokuba bethathelwe izimpahla zabo zokusebenza ngoMsombuluko mhla zingama-30 kuNtulikazi (July) lapho kufike amaphoyisa kamasipala kule ndawo athatha imishini yabo.
Ngokusho kwabo (abantu bokufika) amaphoyisa akwaMasipala uMsunduzi afike abakhomba ngezibhamu abatshela ukuthi abavale bayeke ukusebenza lana baphindele kwelakubo. Baphinde basola lamaphoyisa ngokubulala izinto abasebenza ngazo okubalwa kuzona izibuko baphinde babafutha nange-pepper spray.
Kuthiwa amaphoyisa kamasipala awaqali ukufika kule ndawo ukuzothatha izimpahla zabantu bokufika njengoba nangenyanga eyedlule bafika bazithatha zonke izimpahla zabo.
UMnuz Abdul Kone odabuka e-Ivory Coast uthe ngenyanga eyedlule amaphoyisa kamasipala amuthathela yonke into yakhe okubalwa kuyona nemishini yokugunda eyi-17.
Uthe ngoMsombuluko baphinde bathatha konke futhi nakhona bekunemishini yokugunda eyi-14.
“Sikhathele ukudlala umasipala manje ngoba lento abayenzayo ukusihlukumeza. Ngifuna ukubathathela izinyathelo zomthetho ngoba ngisho kuthiwa bayafika bazozithatha lezi zinto zethu abaphumeli obala ukuthi kungani bezithatha kunalokho bavele babe nodlame uma sithi siyabuza ukuthi kungani benza lokhu abakwenzayo.
“Ngenyanga edlule asikwazanga ukusebenza izinsuku eziyi-14 ngoba bebematasa besihlukumeza singakwazi ukusebenza kahle.Siyazi ukuthi lento abayenzayo bayenza kuthina kuphela ngoba abazi ukuthi asibona abakulelizwe,” kubeka yena .
UMnuz Musa Kabota odabuka eMalawi uthe into ebadida kakhulu ukuthi le ndawo abayisebenzisela ukugunda abantu bayayikhokhela njalo ngenyanga kumasipala kodwa umasipala awufuni ukubanikeza izincwadi ukuze kube ngeyabo.
“Njalo ngenyanga siyakhokha. Umasipala uhleli usithembisa ukuthi uzosinikeza ama-license kodwa kuze kube yimanje asikakawatholi. Bathatha ngisho ama-passport ethu ngoba bethi bafuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi silana ngokusemthethweni.
“Ayikho into engalungile esiyenzayo isono senu nje ukuthi siyazizamela siyasebenza sondla imindeni nezingane zethu. Le ndawo siyinakekela thina siyazihlanzela yona ngoba siyazi ukuthi kumele ihlanzeke njengoba kuyithina esisebenzela kuyona,” kubeka yena.
Okhulumela uMasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha uthe ukususa abantu abadayisa ngokungekho emthethweni uhlelo lukamasipala oluba khona njalo ngenyanga nokuhloswe ngalo ukuhlanza idolobha.
“Uma kungukuthi abantu abathintekayo bakhala ngokuthi kunokuhlukumezeka aba kutholile siyabacebisa ukuba bavule amacala esiteshini samaphoyisa,” kusho yena.